Mag-Safe Power Bank, 5000Mah Mag-Safe Wireless Charger, Portable Magnet Power Bank with Dual Input & Output, 15W Fast Wireless Charging Treasure for iPhone 12/12 Mini / Pro / Max (Blue) manufacturers and suppliers | M-uKumkanikazi
Ukutshaja ngokukhawuleza: Le Mag-safe wireless charger mobile power can be used for iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini charging fast at 15W. Kwakhelwe kwisiphelo esiphakamileyo se-Qi yokutshaja ngaphandle kweengcingo ze-smart chip, indawo yokutshaja ngaphandle kwamacingo inokuchonga iifowuni eziphathwayo ngokukhawuleza kwaye ihlawulise ngokukhawuleza.
Umbala: abamnyama abamnyama abamnyama pinki
Ubukhulu: 85 * 55 * 12.5MM
Gcina & Intlawulo: Inyathelo elinye lokutshaja. Ukuncamathisela le tshaja iphathwayo ngasemva kwi-smartphone yakho, emva koko uziphathe kakuhle ngaphandle kweentambo ngaphandle kweentambo.
Umthamo oPhezulu kunye neBhanki yaMandla yokuNgena kweMbini: Le bhanki yamandla ilingana nepokotho ibambe ibhetri enamandla e-5000mAh. Ukuxhotyiswa ngongenelelo olumbini lweMicro USB kunye nohlobo-C, unokutshaja kwakhona ibhanki yakho yamandla ngokulula usebenzisa intambo yohlobo C okanye intambo ye-Micro USB.
Ukuphatheka kunye nokuKhanya: Ukubandakanya ubungakanani be-compact ephawuleka kakhulu kunye noyilo oluhamba-hamba, inokungena epokothweni yakho okanye ebhegini ngokulula ngaphandle kokuhlala kwindawo eninzi kwaye iqinisekise ukuthwala okungathethekiyo naphi na apho uya khona. Iluncedo ekhaya, eofisini nakwiholide.
• Usebenza ngakumbi: Itshaja ekhuselekileyo yeMag yenza ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngokukhawuleza. Zimbini iindlela zokutshaja ezahlukeneyo kwibhanki yamandla eselfowuni, enokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abohlukeneyo. Abathengi banokubiza ngokukhululekileyo ngokusebenzisa i-USB-C yesiphelo sendlela kwaye kwangaxeshanye bahlawulise ifowuni yakho ngaphandle. Qinisekisa ukuba ukhetha ikhebula elichanekileyo kwaye uqhagamshele izixhobo ezi-2 ngokuqinileyo.
Egqithileyo I-5000mAh Slim Magnetic Powerbank enesiphatho seRingi 5W Ishaja engenazingcingo kwiifowuni ze-Android ze-Android
Umngundo zabucala 22.5W indlela Double itshaja Fast ...